အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၃ | နတ္ထိ
« အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၂
မွေးနေ့လက်ဆောင်ဟောင်းတစ်ခု ဖွင့်ကြည့်ခြင်း »
မဟာဝံသကျမ်းမှာ အသောကဘုရင်ရဲ့ အမည်နာမကို ရိုးရိုးလေး ရှင်းပြထားတယ်။
စဏ္ဍာသောကောတိ ဉာယိတ္ထ၊ ပုဗ္ဗေ ပါပေန ကမ္မုနာ။
ဓမ္မာသောကောတိ ဉာယိတ္ထ၊ ပစ္ဆာ ပုညေန ကမ္မုနာ။
“ရှေးက ပြုခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုကြောင့် စဏ္ဍာသောကလို့ နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့်
နောင်မှာ ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုကြောင့်ပဲ ဓမ္မာသောကလို့ နာမည်ရခဲ့တယ်။”
“Candasoka (the wicked Asoka) was he called in earlier times, by reason of his evil deeds; he was known as Dhammäsoka (the pious Asoka) afterwards because of his pious deeds.”
(The Great Chronicle of Lanka-Wilhelm Geiger)
အသောကကျောက်စာတွေမှာတော့ “ဒေ၀ါနံ ပိယ အသောက, ဒေ၀ါနံ ပိယေ ပိယဒသိ ရာဇာ, ပိယဒသိ လာဇာ မာဂဓေ, ဒေ၀ါနံ ပိယေ ” ဆိုပြီး ထီးသုံးနန်းသုံးဘွဲ့တော်တွေကို ရေးထိုးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အသောကဆိုတဲ့ အမည်ကိုတော့ ကျောက်စာတစ်ခုမှာပဲ တွေ့တယ်။ ဒါက အတော် အရေးကြီးတာ။ သမိုင်းလေ့လာသူတွေက အက္ခရာတွေ ကြည့်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါ ပုံဖော်ရတာ။ ရှေးက လက်နဲ့ ရေးထားတာတွေကို နောက်မှ ခြေနဲ့ လိုက်ဖျက်နေလို့ ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
၁။ ဒေ၀ါနံ ပိယေ ပိယဒသိ လာဇာ ဟေ၀ံ အာဟာ။
၂။ ဒုဝါဍသ-၀သာဘိတေန မေ ဣယံ အာနပယိတေ၊ သ၀တာ ၀ိဇိတသိ မမ ယုတာ လဇုကေ ပါဒေသိကေ စ ပံစသု ပံစသု ၀သေသု အနုသယာနံ နိခမိတု၊ ဧတာယေ၀ါ အထာယေ ဣမာယေ ဓံမနုသတိယာ ယထာ အံနာယေ ပိ ကံမာ ယေ။ သာဓု။
၃။ မာတာပိတိသု သုသုသာ မိတာသံထုတ-နာတိကျာနံ စာ ဗံဘန-သမနာနံ စာ သာဓု၊ အပ၀ိယာတာ အပဘံဍတာ သာဓု။ ပလိသာပိ စ ယုတာနိ ဂနနသိ အနပယိသန္တိ ဟေတုဝတာ စာ ၀ိယံ ဇနတေ စ။
မင်းတကာတို့ ချစ်ကြည် လေးစားအပ်၍့ ပိယဒဿီဟု ၀ှဲ့ချီ-ခပ်နှိပ် အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်၏့ ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံယူ-ရရှိသော အသောက မင်းတြားမြတ်ကြီး မိန့်ပြန်တော်မူသည်။ ငါဘုရင် မင်းတြားသည် အဘိသိက် သွန်း၍ တဆဲ့နှစ်နှစ် အခါ ဤတရားစာတော်ကို ထုတ်ပြန်တော်မူအပ်သည်၊ တိုင်းနိုင်ငံတော် အလုံး၌၄င်း, ငါမင်းတြားနှင့် ဆက်စပ်သည့် လက်အောက် ဘုရင်ခံတို့ အုပ်စိုးရာ ၀န်ထမ်းနိုင်ငံတော် အလုံး၌၄င်း, ငါးနှစ် ငါးနှစ်လျှင် တကြိမ် တကြိမ်ကျ တရားတော်ကို နိုင်ငံတော်၌ ကျင့်ဆောင်လိုက်နာကြစေရန် တရားဓမ္မ ညွှန်ပြ ဟောပြောရေးအတွက်၎င်း, ထိုမှတပါးသော ပုညကြိယများအတွက်၎င်း, နယ်လှည့်ထွက်ကြစေကုန်၊ ဤတရားတော်ဆိုင်ရာ သြ၀ါဒနှင့် အလားတူပင် တရားတော်နှင့် ပတ်သက်ရာ အခြားအမှုများ၌လည်း ပြုကျင့်လိုက်နာကြစေကုန်၊ ၄င်းတို့ကား- အမိအဘတို့နှင့် အဆွေခင်ပွန်း ချစ်ကျွမ်းဝင်သူ, ဆွေမျိုး ဥာတိတို့၏ အဆုံးအမကို နားထောင်-လိုက်နာခြင်းသည် (ပစ္စုပ် တမလွန် ချမ်းသာကြောင်း) ကောင်းလှ၏၊ ရဟန်း-ပုဏ္ဏားတို့အား လှူဒါန်းခြင်းသည်လည်း (နတ်ရွာနိဗ္ဗာန် ရရောက်ကြောင်း) ကောင်းလှ၏၊ သတ္တ၀ါတို့ကို မညှင်းဆဲ၊ မသတ်ဖြတ်ခြင်းသည်လည်း (ဘေးရန် ဥပဒ် မကပ်ရကြောင်း) ကောင်းလှ၏၊ အကုန်အကျမများစေပဲး, ချွေတာသုံးစွဲခြင်း, အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း-ပရိက္ခရာ နည်းပါးခြင်းသည်လည်း (ဤပစ္စက္ခ ကြောင့်ကြမရှိ ဧးမြကြောင်း) ကောင်းလှ၏၊ (ဤထုတ်ပြန်ချက် တရား-အမိန့်တော်က်ို သိရှိကြားနာသူ) ပရိတ်သတ်များကလည်း မိမိတို့နှင့် ဆိုင်စပ်ရာ၌ အမိန့်ပြန်ကြားစေ၊ အသင်းအပင်း၌ စပ်ဆိုင်သူများလည်း ဆိုင်ရာအသင်းအစု၌ အကြောင်းချုပ်အားဖြင့်၎င်း, အကျယ်ဝေဖန်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း အမိန့် ပြန်ဆိုကြစေ။
နတ်တို့ ချစ်မြတ်နိုးသော ပိယဒသီမင်းကြီးသည် ဤသို့ မိန့်တ်ေမူ၏။
ငါအဘိသိက်ခံသည်မှ တစ်ဆဲ့နှစ်နှစ်မြောက်၌ ဤအမိန့်တော်ကို ထုတ်ပြန်တော်မူ၏။
ငါ၏ နိုင်ငံတော် အလုံး၌၊ ယုတ ရာဇုက ပါဒေသိက ဟူသော (ရွှေမြို့တော်တိုင်းခရိုင်) အမတ်တို့သည်၊ ငါးနှစ် ငါးနှစ်မြောက်တိုင်း ဤဆိုလတံသော တရားအဆုန်းအမအလို့ငှာ၎င်း၊ အခြားအမှုကိစ္စတို့ အလို့ငှာ၎င်း၊ ခရီးထွက်ခွာ လှည့်လည်ကြကုန်ရာသည်။
အမိအဖတို့အား ကျိုးနွံခြင်းသည် ကောင်း၏။ မိတ်ဆွေ၊ အသိအကျွမ်း၊ ဆွေမျိုး၊ ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့အား ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ သတ္တ၀ါတို့၏ အသက်ကို မသတ်ခြင်းသည် ကောင်း၏။ ချွေတာသုံးစွဲခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို အသင့်အတင့်သာ စုဆောင်းခြင်းသည် ကောင်း၏။
လွှတ်တော်အဖွဲ့ကလည်း ယုတအမတ်များအား အက်ျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ၊ (အမိန့်တော်) စာပါအတိုင်း မှတ်သား၊ နာခံကြရန်၊ အမိန့်ထုတ်ဆင့် ကြစေကုန်သတည်း။
ဒေ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင်းသည် ဤသို့ မိန့်ကြား၏။ ငါသည် အဘိသိက်ခံ၍ ၁၂မြောက်၌ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်၏။ ငါ၏ နိုင်ငံ တ၀ှန်းလုံး၌ ယုတ, ရာဇုက, ပါဒေသိက အမတ်တို့သည် ငါးနှစ် ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် အခြားကိစ္စကို စူးစမ်း စစ်ဆေးရန် ထွက်သကဲ့သို့ ဤတရားအဆုံးအမအတွက် ထွက်ကြရမည်။ အမိအဖတို့စကားကို နာယူခြင်းသည် ကောင်း၏။ အဆွေ, ခင်ပွန်း, အသိအကျွမ်း, ဆွေမျိုး, ဥာတကာ, ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့အား ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ သတ္တ၀ါတို့ အသက်ကို မသတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ကောင်း၏။ ခြွေတာခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာ အသင့်အတင့်သာ ရှိခြင်းသည် ကောင်း၏။
ပရိတ်သတ်ကလည်း ယုတအမတ်တို့အား အကြောင်းအကျိုးဖြင့် ဝေဖန်စစ်ဆေးရန် အမိန့်ပေးရမည်။
His Sacred and Gracious Majesty thus said: By me consecrated twelve years was the following ordained: Everywhere within my dominions, the Yuktas, the Rajuka and the Pradesika must every five years, go out on tour by turns as well as for other business too as for this purpose, for this religious instruction: Commendable is the service of father and mother, commendable is liberality to friends, acquaintances, relatives, Brahmans and Sramanas, commendable is abstention from the slaughter of living creatures, commendable also is not to spend or hoard too much. The Council will also similarly instruct the Yuktas for purposes of accounts in accordance with my order and its ground.
Thus says King Priyadarsi, the Beloved of the Gods:- This was ordered by me when I was consecrated twelve years: Everywhere in my Empire, the Yuktas, the Rajukas and the Pradesikas should go out on tour every five years as for this business as for other purpose too, for the instruction in Dhamma,
“Desirable is hearkening to mother and father, desirable is liberality to friends, acquaintances, relatives, Brahmanas and Sramanas: desirable is the abstention from the immolation of animals; desirable is also small expense and small accumulation.” Likewise the assembly will also order the Yuktas for purpose of accounts according to my order and its ground.
Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi
This entry was posted on April 5, 2008 at 9:09 am and is filed under စာကိုး, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၃”
April 6, 2008 at 1:14 pm | Reply
သီရိဓမ္မာ သောက မင်းကြီးရဲ အက္ခရာတွေ သေချာ ဖတ်သွားပါတယ် … လက်နက်မသုံးပဲ သီလနဲ့ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ပုံ တွေ မှတ်သားစရာပါ 😀
ကိုစိုးထက်…“အသောကဓမ္မ”လို့ ထင်ရှားပြီး တရားမျှတပြီး လက်တွေကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ဟာ ဒဏ္ဍာရီလဲ မဆန်, ဂန္ဓာရီလဲ မဆန်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။